WPML: သင်၏ဘာသာစကား WordPress ဆိုက်ကိုဤဘာသာစကားမျိုးစုံသုံး Plugin နှင့်ဘာသာပြန်ဘာသာပြန်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဘာသာပြန်ပါ Martech Zone
WPML သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုဘာသာစကားမျိုးစုံသော WordPress site တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါလက်ရှိပြေးနေသည် GTranslate ပလပ်အင်ကို Martech Zone ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားမျိုးစုံသုံးတဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းကိုလုပ်ဖို့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးချဲ့နိုင်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်သို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသွားအလာကိုလည်းတိုးပွားစေခဲ့သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်သိသိသာသာဟစ်စပန်းနစ်လူ ဦး ရေရှိသော site တစ်ခုအားယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဝေသည်။ GTranslate ကဲ့သို့သော plugin များသည်စက်ဖြင့်ဘာသာပြန်ခြင်းကိုကောင်းစွာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောမက္ကဆီကန် - အမေရိကန်ပရိသတ်အတွက်စကားလုံးများ၏ထူးခြားချက်များကိုဖမ်းယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးသက်ရောက်မှုအတွက်အကြောင်းအရာကိုပညာရှင်ဆန်စွာဘာသာပြန်ဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ကြိုက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်ကွဲပြားသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလိုအပ်ပြီး WordPress ဘာသာပြန်ပလပ်ဂင်များတွင် ဦး ဆောင်သူမှာသာဖြစ်သည် WPML.
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကို WPML နှင့်မည်သို့ပြန်ပြောင်းရမည်နည်း
WordPress - အညွှန်း၊ ဝစ်ဂျက်များ၊ စာမျက်နှာများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ စိတ်ကြိုက်ပို့စ်အမျိုးအစားများ (သို့) အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုသင်၏ WordPress ဆိုက်သို့ဘာသာပြန်ဆိုပါ။ WPML သည် Gutenberg အယ်ဒီတာကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
ဘာသာစကားများ - WPML မှာဘာသာစကား ၄၀ ကျော်ပါ ၀ င်ပါတယ်။ WPML ၏ဘာသာစကားအယ်ဒီတာကို သုံး၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားမျိုးကွဲများ (ကနေဒါပြင်သစ်သို့မဟုတ်မက္ကဆီကန်စပိန်ကဲ့သို့) ကိုလည်းထည့်နိုင်သည်။
URL ဖွဲ့စည်းပုံ - ကွဲပြားသောဘာသာစကားအကြောင်းအရာများကိုဒိုမိန်းတစ်ခုတည်း (ဘာသာစကားလမ်းညွှန်များတွင်)၊ ဒိုမိန်းခွဲများသို့မဟုတ်လုံးဝကွဲပြားသောဒိုမိန်းများတွင်စီစဉ်နိုင်သည်။
စက်ဘာသာပြန်ခြင်း - ဘာသာပြန်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဘာသာပြန်ကို ဦး စွာရယူပါ။ သို့မှသာအောက်ဘက်သို့သင်အချိန်နှင့်ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူဘာသာပြန်ခြင်း - သာမန် WordPress အသုံးပြုသူများကိုဘာသာပြန်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ။ ဘာသာပြန်မန်နေဂျာများသတ်မှတ်ထားသောဘာသာပြန်အလုပ်များကိုသာဘာသာပြန်သူများလုပ်နိုင်သည်။
ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများ - WPML ၏အစွမ်းထက်သောဘာသာပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုသင်ရွေးချယ်သောဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဘာသာပြန်အတွက်အကြောင်းအရာများကို WPML's Translation Dashboard မှတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ။ ဘာသာပြန်ပြီးသောအခါသူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။
Theme နှင့် Plugin String ဘာသာပြန်ခြင်း - WPML သည် PO ဖိုင်များတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် MO ဖိုင်များကိုတင်ခြင်းမှသင့်ကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ စာသားများကိုအခြား plugins များနှင့် Admin ဖန်သားပြင်များတွင်တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်နိုင်သည် String ဘာသာပြန်ခြင်း အင်တာဖေ့စ။
ဘာသာစကားမျိုးစုံသော e-commerce ဆိုဒ်များကို WooCommerce ဖြင့်ဖွင့်ပါ။ ရိုးရှင်းသောနှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ၊ ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ၊ အရောင်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့် WooCommerce ကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ခံမှုခံစားပါ။
WPML ကသင့်အားမည်သည့်စာသားသည်ဘာသာပြန်ရန်လိုသည်ကိုပြသပြီးသင့်အတွက်အပြည့်အစုံဘာသာပြန်ထားသောစတိုးတည်ဆောက်သည်။ product ည့်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းမှစတင်ခြင်း၊ လှည်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းမှတဆင့်နှင့်ဒေသတွင်းအတည်ပြုအီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားရမည်။
ဘာသာစကားမျိုးစုံအဆင်သင့်သော themes များဖန်တီးရန်အထူးပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ WordPress API လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာအသုံးပြုပါ၊ ကျန် WPML ကိုဂရုစိုက်ပါ။
WPML ကို download လုပ်ပါ
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် WPML.
Tags: Multi-ဘာသာစကားဘာသာစကားမျိုးစုံ wordpressဘာသာစကားမျိုးစုံ Permalink ဖွဲ့စည်းပုံပလပ်အင်ဘာသာပြန်ချက်ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများWooCommerce ဘာသာပြန်ချက်WordPresswordpress ဘာသာပြန်ချက်wordpress ဘာသာပြန်ပလပ်အင်wpml
Salesforce Contact ID ကို Gravity Forms နှင့် WordPress ဖြင့်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း